I-IDC iya kuhlaziya amanani okuthunyelwa kukaXiaomi kwikota yokuqala ye-2019 | I-Androidsis
I-IDC ikhuphe ingxelo ngo-Epreli 30 ichaza inani leeyunithi zeefowuni ezithunyelwe kwikota yokuqala ye-2019.
Izibalo ziveze ukuba iXiaomi ithumele iiyunithi ezingama-25 ezigidi, 10% ngaphantsi kwekota enye yonyaka ka-2018. Nangona kunjalo, uXiaomi wakhupha ingxelo kumajelo eendaba ebonisa ukuba le datha ayichanekanga kwaye ingaphantsi kwento ebeyithumele. Iinkcukacha ezingezantsi ...
Ingcali yezobuchwephesha yaseTshayina yathi kumaphepha ndaba ngenene kuthunyelwe i-27.5 yezigidi ze-smartphones kwikota yokuqala ye-2019. Ngenxa yalonto, i-IDC ikhuphe ingxelo yayo kwaye yabhengeza ukuba izakuphinda iyikhuphe ingxelo kunye nenani elitsha kwiveki ezayo.
Usenokuzibuza ukuba yintoni le ingxabano, kwaye impendulo kuloo nto la manani abalulekile kubatyali malinjengoko kufuneka bazi ukuba ziqhuba kakuhle kangakanani iinkampani abazixhasayo. Inani elincinci linokuchaphazela ukuzithemba kwabatyali zimali kwishishini, into enokuthi ichaphazele kakhulu ukukhula, ukukhula kunye nokwandiswa kwenkampani ngokwayo.
Ingxelo ye-IDC yahlukile kuleyo yeearhente ezifanayo, ezinje ngeCanalys, Counterpoint, kunye neQhinga lokuHlola. Bobathathu baxele ukuba iXiaomi ithumele i-27.8 yezigidi, i-27.8 yezigidi, kunye neeyunithi ezizigidi ezingama-27.5 ngokwahlukeneyo, eziphakame kakhulu kuneeyunithi ezingama-25 ze-IDC.
UXiaomi okwangoku ungomnye wabavelisi abaphezulu abahlanu kwimarike ye-smartphone. Inesabelo sentengiso se-8% kwaye isakwandisa ukufikelela kwayo. Kwinyanga ephelileyo, wayikhupha URedmi Go, i Redmi 7 kunye Redmi Qaphela 7 eNigeria, kuphawula ukungena kwayo kwakhona e-Afrika.
Kusenokwenzeka ukuba singqina umsebenzi omkhulu ngakumbi kumenzi waseTshayina, njengoko ifemu iye yakubonisa kancinci oku ixesha elithile. Ukwanda nokuthandwa kwayo kubonakala kungayeki, ngokuchaseneyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-IDC iya kuhlaziya amanani okuthunyelwa kukaXiaomi kwiQ2019 XNUMX kwiveki ezayo
I-Galaxy Fit kunye neFit E ziqaliswe ngokusemthethweni eSpain